Version 0.3.2 – Kely ny sasany fixes
Aogositra 3, 2009 amin'ny tolotra 14 Comments
Io dikan-tonga ny manamboatra ny sasany olana kely ny nanangona isika raha mbola miasa amin'ny lehibe kokoa ny sasany miasa. Ny tena vahaolana dia ny iray izay mamela ny fampiasana ny tena voasakantsakan'ny pejy izay nahatonga olana tamin'ny lasa. Ny olana kely momba ny sasany koa fotsy pejy raikitra. Raha tojo fotsy pejy, Miresaha fotsiny izahay, na fanehoan-kevitra eto ka ataovy Ho miasa (tsy php4 azafady…).
Tianay ny hisaotra Antony ny fanampiany eo amin'ny fitaterana sy ny debugging ireo olana ary koa ho Mpanampy amin'ny fandikan-teny ity Ndao ho Rosiana.
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: bugfix, nanome fandikan-teny, tsy ampy taona, fanafahana, WordPress plugin
Aogositra 4, 2009 amin'ny 11:31 aho
Tsisy fisaorana! 😀
Aogositra 4, 2009 amin'ny 7:45 am
Misaotra be dia be ho an'ny fanavaozana. Zava-tena lehibe plugin 🙂
Tomas Kapler milaza
Aogositra 7, 2009 amin'ny 3:37 am
ny plugin no hany iray, izay tsy hanatsarana automaticaly. Moa ve ususal, na azoko irery ihany?
Aogositra 8, 2009 amin'ny 12:14 aho
Tsy fantatro, nanandrana na oviana na oviana fa… tsy misy antony izany dia tsy.
Ve ianao hahazo misy fahadisoana hafatra?
Aogositra 7, 2009 amin'ny 11:39 am
Tsy miasa tsara!
Ny haingana indrindra mandeha ho azy sy ny mpandika teny aho hatramin'izay nampiasa (ary nahita)
Aogositra 8, 2009 amin'ny 12:13 aho
Mankasitraka izany isika 🙂
Aogositra 13, 2009 amin'ny 6:25 am
Miezaka manao tranonkalam-baovao amin'ny 3 samy hafa fiteny ary ny Transposh plugin toa ho ny tsara indrindra ho an'ity tetikasa.
Ny olana aho dia ny Bokotra Zavatra tsy miasa. Inona no yould hahatanteraka izany ? Test Site: http://www.brinvest.ch/wp/
Aogositra 14, 2009 amin'ny 12:33 aho
ok, Toa ny Theme dia fanakanana ny Hanova ny asa 🙁
Afaka manampy mba hahita izay mihitsy manakana ny Hanova ny asa ? Ny foto-kevitra aho mampiasa amin'ny http://www.brinvest.ch/wp/ dia http://www.wp-themes.der-prinz.com/magazine/
Aogositra 17, 2009 amin'ny 12:55 aho
Tsy maintsy mamorona ny asany ny mampiasa gadget bebe kokoa satria manana 2 sidebars ary tsy afaka mampiasa ihany 1 plugin Widget ;(, thx ho an'ny lehibe plugin!!!
Aogositra 23, 2009 amin'ny 11:09 am
Great plugin! Ary ny tena iray marani-tsaina * + plugin! 🙂
Efa nandefa lahatsoratra kely amin'ny http://www.myatus.co.uk/2009/08/23/fancy-wordpress-translations ny fomba hanaovana fanovana madinika sasany ny WP foto-kevitra mba ho kely kokoa ny mpampiasa namana / toerana tsy mandany — angamba izany no mahaliana ny olona.
Koa, Na dia, Te-hanolotra ny safidy fanampiny ao plugin Admin. Tsara, roa raha ny marina:
Izaho mahafantatra ny “no_translate” kilasy (ary aho amin'izao fotoana izao fa mampiasa). Fa dia mety ho mora kokoa ho an'ny olona iray mba manana saha Ovay ao amin'ny Admin, izay afaka manampy ny mpianatra fotsiny anarana (amin'ny endrika “.classname”) na ID (amin'ny endrika “#ID”). Aoka izany ho toerana / faingo tafasaraka lisitra na zavatra fancier…
Tamin'io ihany naoty, dia mety ho tsara ihany koa raha afaka manilika singa sasany, izany hoe., aza mandika izany na inona na inona eo “” Tags. Antony izany, araka ianao tsikaritrao eo an-tanako toerana, fa ny mari-tomboky no fonosina ao anatin'ny or also gets translated. It's rather silly to have a "if then else" statement become "misschien dan anders" (in Dutch). The same goes for right-aligned text, ie Hebrew or Arabic.
Septambra 4, 2009 amin'ny 11:23 am
Aho mampiasa ny Global Mpandika Plugin ny Nothing2Hide fa nijanona mampiasa azy io rehefa nahita tao amin'ny Google Account / Webmaster Tools dia nisy famoronana-jatony sy ny an-jatony 404 Error pejy. Hanao ny plugin hamorona 404 Error pejy toy ny mpandika teny hafa plugin? Raha tsy, dia te-hanomboka hampiasa azy io!
Septambra 8, 2009 amin'ny 10:26 aho
Aho manoratra fanehoan-kevitra amin'ny endriny vaovao tsy mampiseho izany fotsiny. Te-hilaza ny manana Bug ao. Canot ampiasaina amin'ny Wordtube Plugin ( intsony Playlist ) ary koa fa tsy mifanaraka amin'ny NG Galery ( intsony Diashow ).
Manantena aho fa afaka manamboatra azy, ny lehibe plugin !!
Septambra 13, 2009 amin'ny 8:24 aho
azonao manondro ahy ho amin'ny Ndao ny olana ka ho afaka aho mba hijery?
Aogositra 23, 2009 amin'ny 8:28 am
Fancy WordPress Anarana iombonana…
Tiako mba hahazoana antoka fa tsy mbola niala avy ny mety ho mpihaino iraisam-pirenena. Ohatra, iray amin'ireo sehatra fiadian-kevitra no mpandehandeha be iray an'ny orinasa frantsay.
Soa ihany, WordPress manana plethora ny fandikan-teny plug-ins ary ny roa tamin'izy ireo nahasarika ny masoko: …